ဇွန်လ (၁) ရက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နို့နေ့ - Akhayar Lifestyle
ဇွန်လ (၁) ရက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နို့နေ့
30 May 2017 . 9:41 PM
အဟမ်း အဟမ်း…ခေါင်းစဉ်ကြားလိုက်တာနဲ့ ဘာသွားမြင်ကြသလဲဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်နော် 😛 ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက နို့ဗျ…. နို့စစ်စစ်။ တလွဲမတွေးပါနဲ့၊ ဇွန်လ ၁ရက်နေ့ဟာ နို့…အဲ.. နွားနို့၊ ဆိတ်နို့၊ ကျွဲနို့ စတဲ့ နို့တွေအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အထိမ်းအမှတ်နေ့ပါဗျာ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နို့နေ့ဆိုတာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ စိုက်ပျိုးရေး အသင်းက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစားအစာတစ်ခုအဖြစ် နို့ရဲ့ အရေးကြီးမှုကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တည်းက စတင်ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
World Milk Day ကို လူတိုင်းပါဝင်ဆင်နွှဲလို့ ရပြီး အားကစားအသင်းတွေ၊ နို့နဲ့ နုိ့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ မွေးမြူရေးအသင်းအဖွဲ့တွေ၊ ကျောင်းတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေဟာ အဲဒီနေ့မှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြလေ့ရှိပါတယ်။
ဘယ်လို ပါဝင်ဆင်နွှဲလေ့ ရှိလဲဆိုတော့ လတ်ဆတ်တဲ့ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ တည်ခင်းဧည့်ခံတဲ့ ပါတီပွဲတွေ ကျင်းပတာမျိုးပေါ့။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ အဲဒီနေ့အတွင်းကျင်းပတတ်တဲ့ နမူနာပုံစံတွေကတော့
နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေပဲ သီးသန့် ပါတဲ့ နေ့လည်စာနဲ့ တည်ခင်းဧည့်ခံတာတို့
ကျောင်းသားအရွယ်တွေကို မွေးမြူရေးခြံကို အလည်အပတ်ခရီးထွက်စေတာတို့
နွားတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ဓာတ်ပုံအစားဆုံးနွားဆု ချီးမြှင့်တာတို့ (အလဲ့လဲ့ …ဆန်းကြယ်တယ်နော် :P)
နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းတာတို့
နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အာဟာရတန်ဖိုးအကြောင်းကို အာဟာရပညာရှင်တွေက ဆွေးနွေးတင်ပြတာတို့ လုပ်ပြီး ဒီနေ့ကို ဆင်နွှဲကြပါတယ်။
World Milk Day ကျင်းပရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့
ကောင်းမွန်တဲ့ အစားအသောက်၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အာဟာရရရှိစေဖို့
မွေးမြူရေးသမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လူ့မှုအဖွဲ့အစည်း၊ မြေယာနဲ့ မွေးထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်စေဖို့နဲ့ တာဝန်ယူမှုရှိစေဖို့
နို့ထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုတွေဟာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ လူသားတွေရဲ့ အသက်ရှင်သန်မှုကို အကျိုးပြုစေဖို့ ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အခရာပရိသတ်ကြီးထဲက နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကွီးတို့ ၊ မွီးတို့လည်း ဇွန်လ ၁ရက် World Milk Day (ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာ နို့နေ့) ကို အနည်းဆုံးတော့ နွားနို့တစ်ခွက်လောက် သောက်ရင်း ပါဝင်ဆင်နွှဲလို့ ရပြီနော်။
ဇှနျလ (၁) ရကျ ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ နို့နေ့
အဟမျး အဟမျး…ခေါငျးစဉျကွားလိုကျတာနဲ့ ဘာသှားမွငျကွသလဲဆိုတာ ကြှနျတျောသိတယျနျော 😛 ။ ကြှနျတျောပွောခငျြတာက နို့ဗြ…. နို့စဈစဈ။ တလှဲမတှေးပါနဲ့၊ ဇှနျလ ၁ရကျနဟေ့ာ နို့…အဲ.. နှားနို့၊ ဆိတျနို့၊ ကြှဲနို့ စတဲ့ နို့တှအေတှကျ ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ အထိမျးအမှတျနပေ့ါဗြာ။
ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ နို့နဆေို့တာ ကမ်ဘာ့ကုလသမဂ်ဂ စားနပျရိက်ခာနဲ့ စိုကျပြိုးရေး အသငျးက ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ အစားအစာတဈခုအဖွဈ နို့ရဲ့ အရေးကွီးမှုကို အသိအမှတျပွုတဲ့ အနနေဲ့ ၂၀၀၁ ခုနှဈတညျးက စတငျကငျြးပခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
World Milk Day ကို လူတိုငျးပါဝငျဆငျနှဲလို့ ရပွီး အားကစားအသငျးတှေ၊ နို့နဲ့ နုိ့ထှကျပစ်စညျးထုတျလုပျရောငျးခသြူတှေ၊ ကနျြးမာရေးနဲ့ အာဟာရအဖှဲ့အစညျးတှေ၊ မှေးမွူရေးအသငျးအဖှဲ့တှေ၊ ကြောငျးတှနေဲ့ တက်ကသိုလျတှဟော အဲဒီနမှေ့ာ ပါဝငျဆငျနှဲကွလရှေိ့ပါတယျ။
ဘယျလို ပါဝငျဆငျနှဲလေ့ ရှိလဲဆိုတော့ လတျဆတျတဲ့ နို့နဲ့ နို့ထှကျပစ်စညျးတှေ တညျခငျးဧညျ့ခံတဲ့ ပါတီပှဲတှေ ကငျြးပတာမြိုးပေါ့။ ကမ်ဘာတဝှမျးမှာ အဲဒီနအေ့တှငျးကငျြးပတတျတဲ့ နမူနာပုံစံတှကေတော့
နို့ထှကျပစ်စညျးတှပေဲ သီးသနျ့ ပါတဲ့ နလေ့ညျစာနဲ့ တညျခငျးဧညျ့ခံတာတို့
ကြောငျးသားအရှယျတှကေို မှေးမွူရေးခွံကို အလညျအပတျခရီးထှကျစတောတို့
နှားတှကေို ဓာတျပုံရိုကျပွီး ဓာတျပုံအစားဆုံးနှားဆု ခြီးမွှငျ့တာတို့ (အလဲ့လဲ့ …ဆနျးကွယျတယျနျော :P)
နို့နဲ့ နို့ထှကျပစ်စညျးတှေ လှူဒါနျးတာတို့
နို့နဲ့ နို့ထှကျပစ်စညျးတှရေဲ့ အာဟာရတနျဖိုးအကွောငျးကို အာဟာရပညာရှငျတှကေ ဆှေးနှေးတငျပွတာတို့ လုပျပွီး ဒီနကေို့ ဆငျနှဲကွပါတယျ။
World Milk Day ကငျြးပရတဲ့ ရညျရှယျခကျြတှကေတော့
ကောငျးမှနျတဲ့ အစားအသောကျ၊ ကောငျးမှနျတဲ့ ကနျြးမာရေး၊ ကောငျးမှနျတဲ့ အာဟာရရရှိစဖေို့
မှေးမွူရေးသမားတှဟော သူတို့ရဲ့ လူ့မှုအဖှဲ့အစညျး၊ မွယောနဲ့ မှေးထားတဲ့ တိရစ်ဆာနျတှကေို ပိုပွီး ဂရုစိုကျစဖေို့နဲ့ တာဝနျယူမှုရှိစဖေို့
နို့ထှကျပစ်စညျးရောငျးဝယျမှုတှဟော စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုနဲ့ လူသားတှရေဲ့ အသကျရှငျသနျမှုကို အကြိုးပွုစဖေို့ ဆိုပွီး ဖွဈပါတယျ။
ဒီတော့ အခရာပရိသတျကွီးထဲက နိုငျငံတကာနဲ့ ရငျဘောငျတနျးခငျြတယျဆိုတဲ့ ကှီးတို့ ၊ မှီးတို့လညျး ဇှနျလ ၁ရကျ World Milk Day (ကမ်ဘာ့လုံးဆိုငျရာ နို့နေ့) ကို အနညျးဆုံးတော့ နှားနို့တဈခှကျလောကျ သောကျရငျး ပါဝငျဆငျနှဲလို့ ရပွီနျော။